» विद्युतीय सवारी निर्माणको रेसमा चीन एक्लो प्रतिस्पर्धी !
विद्युतीय सवारी निर्माणको रेसमा चीन एक्लो प्रतिस्पर्धी !
२२ असार २०७६, आईतवार ०६:३५
बिजुलीबाट चल्ने बस, ट्याक्सी, ट्रक जस्ता सार्वजानिक सवारी साधन निर्माण गर्नेको रेसमा चीन एक्लो प्रतिस्पर्धी बनेको छ । किनकि २०१४ देखि हालसम्म विश्वव्यापी रुपमा उत्पादन भएका ९९ प्रतिशत विद्युतीय बसहरु चीनले नै निर्माण गरेको हो । यसरी वातावरण मैत्री सार्वजानिक यातायताको महत्वकांक्षी राष्ट्रिय परियोजना अन्र्तगत चीनले इन्धनबाट चल्ने बस, ट्याक्सी, ट्रक जस्ता करोडौँ सवारी साधनलाई विश्वव्यापी रुपमा ब्याट्रीबाट चाल्ने नयाँ विद्युतिय मोडलका गाडीले प्रतिस्थापन गर्न एक्लै नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिले चीन र अमेरिकाका सडकहरुमा गुडिरहेका चिनियाँ विद्युतिय बसलाई हेर्दा यो योजना सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको भन्न सकिने संचार एजेन्सी वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।
व्यवसायिक विद्युतिय सवारी उत्पादन बेइजिङको ‘मेड इन चाइना २०२५’ औद्योगिक नीति अन्र्तगत पर्दछ जसले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभएर भविष्यमा समेत विदेशी प्रविधिलाई मात दिन सक्ने बताइएको हो । यसरी चिनियाँ निर्माणकर्ताहरुले यस व्यवसायको प्रारम्भिक नेतृत्वले भविष्यमा ठूलो श्रेय र सफलता दिलाउन सक्ने अपेक्षा गरेका छन् । सार्वजानिक सवारीसँगै चीन विद्युतिय कार निर्माणमा पनि उत्तिकै अघि बढिरहेको छ । तर यसमा चाहिँ ग्राहकहरुको मागले पनि प्रमुख भूमिका खेल्दछ ।
यसअघि १ लाख गाडी मात्र व्यापार भएपनि गत जनवरी देखि अक्टोबरसम्ममा भने चीनभित्रै ७ लाख विद्युतिय गाडीहरु विक्री भएका हुन् । यस्तोमा दक्षिणी प्राविधिक केन्द्र सेनजेनमा यो वर्षको अन्त्यसम्म सबै बस र ट्याक्सीहरु विद्युतिय भइसक्ने बताइएको छ । यसरी एउटा विद्युतिय बस निर्माण गरेवापद् उत्पादनकर्तालाई २५,९०० डलर बराबरको प्रोत्साहन राशि पनि दिलाइने गरिएको छ । ‘सेन्टर फर स्ट्राटिजिक एण्ड इन्टरनेस्नल स्टडिज’का अनुसार चीनले २००९ देखि २०१७ सम्म विद्युतिय सवारी निर्माणको समर्थनमा ४८ अर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
नभेम्बरमा मात्र उत्तरपूर्वी शहर दैलान, इन्धनरहित सवारी साधन गुड्ने नयाँ क्षेत्र बनेको हो । यसरी २०२० सम्ममा चीनका सबै प्रमुख सहरमा चल्ने सार्वजानिक सवारीलाई विद्युतियमा परिणत गर्ने केन्द्रिय सरकारको योजना सफल हुने सम्भावना अधिक देखिएको छ । विद्युतिय सवारीको माग पूरा गर्न चीनले २०१४ र २०१७ का बीच ३ लाख ५८ हजार बस निर्माण गरेको बताइएको छ । कुनैपनि विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भएको हुँदा स्थानीय निर्माणकर्ताहरु पनि यो उत्पादनलाई अपनाउन प्रोत्साहित भइरहेको पाइएको छ ।
तर विद्युतीय सवारी निर्माणमा चीनको एकल नेतृत्व धेरै समय नटिक्ने पनि बताइएको छ । किनकी विदेशी कम्पनी भोक्सवागनले पनि चीनमा ग्यासबाट चल्ने ट्रक निर्माण गरिरहेको छ र चाँडै नै विद्युतीय मोडल विकास गर्ने तयारीमा रहेको छ । त्यस्तै निसान मोटरले पनि चीनकै स्थानीय पार्टनर दोङफेङ मोटरसँग मिलेर विद्युतिय ट्रक उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेको छ । अहिले भने विदेशी तथा स्थानीय अटो निर्माणकर्ताहरुले आगामी पीढीको विद्युतिय ट्याक्सी निर्माण गर्नमा काम गरिरहेका छन् । ट्याक्सीप्रेमी चिनियाँ जनतालाई नै लक्षित गर्दै त्यहिँको सबैभन्दा लोकप्रिय ट्याक्सी सेवा कम्पनी दिदी छुशिङले केही समय अगाडि मात्र भोक्सवागन, रेनल्ट, निसान, मित्सुबिसी, टोयोटा मोटर लगायत अन्य ३१ विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युतिय सवारी निर्माणको परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको घोषणा गरेको थियो ।